true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 7 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
Ukungabikhona yisimo esikhona lapho umuntu engaziwa noma engaziwa ngokuphelele ngabanye abantu ngakho-ke “ungongekho” kubo. Lokhu kungenxa yokuthi usanda kuqala ubudlelwano obusha, umsebenzi noma omunye umsebenzi. Kungenzeka futhi ukuthi wehlulekile ebudlelwaneni obukhona, imisebenzi noma izibalo zokubonisa isimo zakhe ziku-trend Engekho.
Ngokulandela uhlelo olungelona olukhona uzoziqalela indlela eya empumelelweni.
Ifomula Engeyona Ekhona
Ifomula Engeyona Ekhona yile:
Thola indlela yokuxhumana nomuntu noma iqembu odinga ukuxhumana nalo.
Zazise kumuntu noma kubantu.
Thola ukuthi yini abayidingayo noma abayifunayo kuwe.
Umuntu osanda kuthatha umsebenzi enkampanini noma emsebenzini osuvele usebenza, uvame ukucabanga ukuthi kungcono azenze aziwe ngokuguqula yonke into. Eqinisweni, akaziwa ngokwanele ukwenza lokhu futhi akanawo umqondo wokuthi yini edingekayo noma efunwayo. Futhi ngakho-ke udala inhlekelele.
Isibonelo, indodana yathatha isitolo sekhofi edumile kayise lapho ubaba wayo esethathe umhlalaphansi. Indodana inqume ukuguqula isikhathi isitolo esivula ngaso, ukuze bakwazi ukuhlala bavulelekile kusihlwa kubafundi bendawo. Waqala ukuvula isitolo ngesikhathi sasemini. Kodwa, kungakabiphi, wathola ukuthi isitolo sesilahlekelwe amakhasimende aso amaningi kwi-café elingumakhelwane. Yini ayenze kabi? Akazange athole ukuthi amakhasimende ayedinga futhi afuna isitolo sekhofi esasivulwa ekuseni ngovivi, lapho ayengathenga khona ikhofi labo endleleni eya emsebenzini! Ngenxa yokuthi akazange asebenzise i-Fomula Yokungabikho, isitolo besisenkingeni.
Kwesinye isikhathi umuntu esimweni sonkungabi khona uthatha ngokuthi uyazi ukuthi yini edingekayo noma efunwa lapho kungumqondo wakhe kuphela futhi ungelona iqiniso nhlobo ngakho wehluleka emsebenzini wakhe noma ebudlelwaneni bakhe.
Futhi kwesinye isikhathi akalaleli ngisho nalokho abanye abantu abamtshela kona ukuthi kuyadingeka.
Ake sithathe isibonelo sokusebenzisa le fomula ngendlela efanele.
Owesifazane uqala umsebenzi omusha esebenza enkulisa enakekela izingane ezincane. Uthola ukuthi indlela engcono yokukhuluma nabazali yilapho bethatha izingane zabo ekugcineni kosuku, njengoba bejaha kakhulu ekuseni. Uzethula kumzali ngamunye futhi ababuze ukuthi yini edingekayo futhi efunwa yibo. Abazali bamazisa ukuthi okusemqoka kakhulu ukuphepha ezinganeni, kanye nezingane ezifunda izinto ezintsha. Bafuna nokuthi izingane zabo zijabule futhi zijabulise. Owesifazane ubuye abuze umnikazi wenkulisa ukuthi yini ayidingayo nayifunayo, futhi umphathi wakhe ugcizelela izinto ezifanayo ncamashi.
Owesifazane manje uqala ukusebenza kanzima “ukufeza” lezi zicelo. Unakekela kakhulu ukuphepha kwezingane, futhi nsuku zonke ufundisa izingane izifundo ezintsha ezijabulisayo. Izingane ziyakujabulela lokhu futhi lapho abazali beziqoqa nsuku zonke, bathola izingane zabo zijabule futhi ziqhosha. Kungakabiphi abazali batshela abangane babo ngalenkulisa enhle futhi uthola ukunyuselwa iholo kuvela kumqashi wakhe. Usebenzise ngempumelelo iFomula yoKungabi khona!
Ukuze uphumelele ebudlelwaneni obusha, umsebenzi noma iqembu udinga ukuthi ulandele izinyathelo zeFomula Yezinto Ezingekho bese kuthi ifomula elandelayo—ilandelane nenye.